Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Ny indostrian'ny fizahantany isam-paritra dia handray ny lahasa afovoany amin'ny kaonferansa manerantany UNWTO any Montego Bay, Jamaika
Ny indostrian'ny fizahantany isam-paritra dia kasaina hatao lohalaharana mandritra ny UNWTO, Governemanta ao Jamaika ary ny Fihaonambe Vondrona Iraisam-pirenena momba ny asa sy ny fitomboana: fiaraha-miasa ho an'ny fizahan-tany maharitra, ao amin'ny Montego Bay Convention Center, St. James, 27-29 Novambra 2017 . Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 6 Jona tao amin'ny Consulat Général de Jamaica nandritra ny Herinandron'ny Karaiba tany New York, ny minisitry ny fizahantany, Honorable Edmund Bartlett, dia nanamarika fa noho ny fiankinan'ny faritra amin'ny fizahan-tany dia zava-dehibe ny fanomezana valandresaka ho amin'izany fihaonambe izany ny fomba ahafahan'ny Karaiba mampiasa azy tsara kokoa.
“Ny fandaharan'asan'ny kaonferansa, na dia eo amin'ny natiora manerantany aza dia misy dikany lehibe amin'i Karaiba. Ary noho izany, nahatsapa izahay fa tokony hampiditra programa manokana ho an'ny Karaiba sy ny sasany amin'ireo olana iadianay. Ity programa ity dia hatao amin'ny andro voalohan'ny fihaonambe amin'ny 27 Novambra ", hoy ny minisitra Bartlett.
LR mipetraka: Hon. Edmund Bartlett, minisitry ny fizahan-tany; Trudy Deans, Consul Jeneraly ao Jamaika; Paul Pennicook, talen'ny fizahan-tany any Jamaika; LR mijoro: John Lynch, Filoha, Birao Mpizahatany ao Jamaika; Matt Cooper, Lehiben'ny Marketing, Caribbean Hotel and Association momba ny fizahan-tany ary Hugh Riley, sekretera jeneraly, Fikambanana fizahan-tany any Karaiba. Ny fotoana dia valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 6 Jona tao amin'ny Consulate General of Jamaica nandritra ny Herinandron'ny Karaiba tany New York, mba hampiroboroboana ny UNWTO, Governemantan'i Jamaika ary ny Fihaonamben'ny Vondrona Iraisam-pirenena momba ny asa sy ny fitomboana: fiaraha-miasa ho an'ny fizahan-tany maharitra, izay hatao tao amin'ny Montego Bay Convention Center, St. James, 27-29 Novambra 2017.
Miaraka amin'ny fifantohana isam-paritra amin'ny andro fanokafana, ny Minisiteran'ny Fizahan-tany dia nahazo ny fankatoavan'ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO) avy amin'ny sekretera jeneraly Hugh Riley sy ny Caribbean Hotel and Tourist Association (CHTA) tamin'ny alàlan'ny Lehiben'ny Marketing Officer Matt Cooper.
Nanambara ny minisitra Bartlett fa ny fizahantany no lehibe indrindra amin'ny fifanakalozam-bola vahiny amin'ny firenena 16 amin'ny firenena 28 any Karaiba ary ny sehatra mahazo ny fampiasam-bola mivantana avy any ivelany (FDI), ary ny faritra dia manana ampahany betsaka amin'ny asa sy ny isan-jaton'ny harin-karena faobe. nalaina avy amin'ny fizahan-tany noho ny faritra hafa rehetra eto an-tany.
Raha ny filazan'ny Minisitry ny fizahantany dia "Tombanana ho olona 1 isaky ny 4 no miasa amin'ny hetsika mifandraika amin'ny fizahantany ary ny sehatra dia mitentina 41% amin'ny fanondranana sy serivisy any Karaiba ary 31% amin'ny vokatra anatiny rehetra."
Ankoatr'izay, ny minisitra Bartlett dia nanondro fa mitovy amin'ny natao tamin'ny lafiny manerantany amin'ny fihaonambe, ny mpikarakara dia nampiditra lohahevitra Karaiba maromaro ao anatin'ny Call for Papers, izay mandrakotra ny fizahan-tany sy ny faharetana, izay horesahina ny fandrahonana, risika ary fanamby. ; ny fanamafisana ny fironana maha-olombelona sy ny renivola; ny fifamatorana rojo fizahan-tany sy ny haitao ary ny fanavaozana.
Raha ny filazan'ny minisitra Bartlett, ny iray amin'ireo vokatra andrasana lehibe amin'ity fihaonambe manerantany ity dia ny Fanambarana tao Montego Bay. “Amin'ny faran'ny fihaonambe dia hisy ny fanangonana ny Drafitra Fanambarana Montego Bay. Avy amin'izany no hivoahanà drafi-pandaharana hoentina any amin'ny toeran'ireo fizahantany, ary koa ny famoahana ny boky faharoa an'ny UNWTO Global Report on Public Private Partnership. ”
Nanambara ihany koa ny minisitry ny fizahantany fa ny Fihaonambe dia hampiasaina hanomezam-boninahitra an'i Sekretera jeneralin'ny UNWTO amin'izao fotoana izao, Dr. Taleb Rifai, izay mifarana amin'ny asany. "Na dia hanana ny fandefasana azy amin'ny fomba ofisialy aza izy amin'ny volana desambra, ny UNWTO dia namela anay hampiasa io fotoana io ho an'ny fandefasana fihetseham-po sy irie 'kokoa", hoy i Bartlett.
Seho iray hafa amin'ity fihaonambe ity ny fanolorana ny Karazan-tsarimihetsika Caribbean Legends, ny voalohany amin'izany, izay ho fiaraha-miasa miaraka amin'ny minisiteran'ny fizahan-tany any Jamaika, ny CTO ary ny CHTA, tohanan'ny UNWTO. Ireo loka ireo, amin'ny sokajy Land, Sea and Air, dia homena ny olona izay nanao marika tsy azo kosehina amin'ny indostrian'ny fizahantany, tsy ny faritra ihany, fa manerantany, manatsara ny marika Karaiba.
Niala tao amin'ny nosy ny minisitra Bartlett nanatrika ny Herinandron'ny CTO Karaiba tamin'ny 5 Jona 2017 ary hiverina ny 11 Jona 2017. Miaraka aminy ilay Strategiste Senior Communication, Delano Seiveright.
SARY: Minisitry ny fizahantany, Hon. Nilaza i Edmund Bartlett fa miankina amin'ny fizahan-tany ny faritra, zava-dehibe ny hanomezan'ny vahaolana ny fihaonambe UNWTO GOJ Global Conference momba ny fomba hampiasan'i Karaiba tsara an'ity indostria ity. Ny fotoana dia valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 6 Jona tao amin'ny Consulate General of Jamaica nandritra ny Herinandron'ny Karaiba tany New York, mba hampiroboroboana ny UNWTO, Governemantan'i Jamaika ary ny Fihaonamben'ny Vondrona Iraisam-pirenena momba ny asa sy ny fitomboana: fiaraha-miasa ho an'ny fizahan-tany maharitra, izay hatao tao amin'ny Montego Bay Convention Center, St. James, 27-29 Novambra 2017.